मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै देउवा, कसलाई छाने नयाँ गृहमन्त्री ? — Sanchar Kendra
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै देउवा, कसलाई छाने नयाँ गृहमन्त्री ?
काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भसकेको छ। सरकारमा रहेका चारवटै पार्टीले आफ्ना केहि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने भएका छन्।माओवादी केन्द्रले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्‍वर जंग गहतराज अथक र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको छ।
यता एकिकृत समाजवादीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायतलाइ फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो। त्यस्तै , श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। जसपाले पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका बारेमा गठबन्धनको उच्च तहमा छलफल भएको छ, केहि मन्त्रीहरु हेरफेर हुनेछन् भने केहि मन्त्रालय समेत साटफेर हुन सक्छन्’, बालु्वाटार श्रोतले भन्यो। श्रोतका अनुसार माओवादीले अर्थमन्त्री शर्मालाई मन्त्रीबाट र्फिता गरेर पार्टी महासचिव बनाउन लागिएको माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले बताए। शर्माको ठाउँमा बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्डले गरेका छन्।
डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रबाट सारेर अर्थ मन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ। त्यसो त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि अर्थमन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। उता, नेकपा एकिकृत समाजवादीले गतिलो मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार वा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग समाजवादीले अघि सारेको छ।
२०६५ पछि माओवादीमा समाहित भएका उनी प्रचण्डसँग बाग्रेनिङ गर्ने र सत्ता र सुविधाभोगको मजा उठाउने पात्रका रुपमा माओवादीभित्रै आलोचित छन्। पछिल्लो पटक एमसीसीको मुद्धामा अध्यक्ष प्रचण्डसँग विमति राख्दै पार्टीभित्र श्रेष्ठको संघर्ष चर्किएको छ।